Guyyan gara magaala deeme - Contes pour le français langue seconde
Guyyan gara magaala deeme Le jour où je quittai la maison pour la ville
Bakki dhabbata atobusaa xinnan ganda kenyaa namafi konkolatootan dhiphatee jira. Kanarra hafee wanti fe’amu qabu bayee tu lafa jira. Namooni tikeeti gurguran konkolatoota iyyan.
“Magaala! Magaala! Gare dhihaa!” jedhe gargaran konkolachisa. Konkolaatan suni kana ani barbaadu ture.
Atobisiin magaaladha bayee guutee jiraa namni garu yabbachuuf ifaaja. Namonni tokko tokko meshaa isaani konkolaata jalatti fe’atan. Namonni kuni immo kessa kayaatan.
Imaltooni harenyi tiikeetiissani cimsani qabatanii lafa teesuma barbadatan. Dubartoonii da’imaa qabana imala isaanif mijeesan.
Ani immo dubarti abban mana irradu’ee tokko biran taa’e. Namni nabira taa’e tokko immo borsaa lasticaa hammatee qabateera. Qophee dulomaafi and kootii dulooma uffate waan aare fakkaata.
Fodddaa konkolatatiin gara alaa yeroon qayee koo ittiguddadhe dhisee gara magaala deemuu koon qayyabadhe. Gara magaala gudda deeman jira.
Meshaa fe’un xummurame jennan namni hunduu tesso qabatee taa’e. Daldaaltonni karaa gubbaa meshaa isaani gurguruf gara keessati lixan. Namni hunduu waan bituu barbaade gafachaa ture. Wacini sun garuu nadinqisisee.
Namooni tokko tokko yeroo wandhugamu bitatan kuuni immo waandhugan bitatan. Namonni akka anaa kan mallaqaa hinqabne, cal jedhanituma ilaalan.
Sochiin suni garu kalaksii konkolaatatin addan citee. Gargaaran konkolaachisaa daldaltootan bu’aa jedhe itti iyyee.
Daldaltonni dafan waldhibanii bahan. Tokko tokko deebi namootaf kenan. Kuuni immo daqiqaa isaa dhumaatitis gurguirf yalaan.
Akkuma atobisin bakka dhaabbate ka’ee, gara foddatin allatin ilaale. Akkam godheen gara gandaa kiyyaa deebi’aa jdheen yaadee ture.
Akkuma imalli ittifufen, konkolaata kessa bayee o’ee. Ejjaa koo cuffen rafuu barbaade.
Samuu koo garu gara maana yaada. Harmeen koo nangan turtii moo? Hiiletiin kiyya gatii baftui ta’a? Obbolessi koo iyyiba sana yadatee bishan obaasa laata?
Osoon deema jiru lafa essumini koo jiru magaala sana kessati yaadadhee. Hiribaa kessatin kufatin deeema.
Sa’ati sagal booda, sagalee cimaa gara ganda kessani deebi’a jedhu dhagahe. Borsaa koo qabbadheen konkolaata kessa utalee bahe.
Konkolaatan gara ganda deebi’u dafee gutee. Dafee garaa bahaa qajelee. Rakkinnii cimaan kiyyaa akkam godheen mana essuma kiyya akkan itti argadhu yaadu ture.
Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi Noziibele fi rifeensa saddan Lukkuu fi Dhimillee Ilimo harre Sirba Sakiimaa Anaanis fi ogummaa Lukkuu fi Risaa